Wɔsiesiee Yesu Amu Kɔsiee No | Yesu Asetena
WƆYII YESU AMU FII DUA NO SO
WƆSIESIEE AMU NO MAA NE SIE
MMAA NO ANHU AMU NO
Yesu wuu Fida awia Nisan da a ɛtɔ so 14, na na aka kakra ama Nisan da a ɛtɔ so 15 afiri ase. Saa da no nso, na ɛyɛ Homeda. Nanso, abɔnefo mmienu a wɔsɛn Yesu nkyɛn no deɛ, na wɔnnya nwui. Saa bere no, sɛ wɔsɛn obi dua so kum no a, na Mmara no kyerɛ sɛ, wɔnnnya “n’amu no nnsɛn dua so mmma adeɛ nnkye so.” Mmom ɛsɛ sɛ wɔsie no “da no ara.”​—Deuteronomium 21:22, 23.
Fida awia biara nso, wɔfrɛ no Ahoboaboa da, efisɛ saa da no na nkurɔfo de noanoa wɔn nnuane, na wɔyɛ nneɛma bi a wɔrentumi mfa nto hɔ nkɔsi sɛ Homeda bɛtwam. Saa Homeda yi deɛ, na ɛyɛ Homeda mmienu a abɛbɔ so anaasɛ Homeda “kɛseɛ.” (Yohane 19:31) Nea enti a ɛyɛ Homeda kɛseɛ ne sɛ, na Nisan da a ɛtɔ so 15 yɛ Paanoo a Mmɔreka Nnim afahyɛ no da a ɛdi kan. Afahyɛ no da a ɛdi kan biara nso yɛ Homeda. (Leviticus 23:5, 6) Afe yi deɛ, da a ɛdi kan no sii nnawɔtwe no da a ɛtɔ so nson a ɛno nso yɛ Homeda.
Yudafo no ka kyerɛɛ Pilato sɛ ɔmma wɔmmubu Yesu ne abɔnefo mmienu a wɔsɛn ne nkyɛn no nan mu na wɔnwu ntɛm. Ɛba saa a, wɔrentumi ntwe wɔn mu nhome yie, enti ɛnkyɛ koraa wɔbɛwu. Asraafo no bae no, wɔhuu sɛ Yesu awu dada, enti bere a wɔbubuu abɔnefo mmienu no nan mu no, wɔammu Yesu nan mu bi. Ɛno maa Dwom 34:20 baa mu sɛ: “Ɔhwɛ ne nnompe nyinaa so; emu baako mpo mmu.”
Ná asraafo no pɛ sɛ wɔhu sɛ Yesu awu ampa. Enti baako de peaw wɔɔ ne mfe. Baabi a ɔde wɔe no, na ɛbɛn ne koma ho. “Ntɛm ara mogya ne nsuo firi baeɛ.” (Yohane 19:34) Wei nso maa nkɔmhyɛ foforo baa mu sɛ: “Wɔhwɛ Deɛ wɔde adeɛ wɔɔ no no.”​—Sakaria 12:10.
Bere a wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu no, na “ɔdefoɔ bi” a wɔfrɛ no Yosef a ɔfiri Arimatea wɔ hɔ. Ná ɔyɛ otitiriw wɔ Sanhedrin no mu. (Mateo 27:57) Ná nkurɔfo ka ne ho asɛm sɛ ɔyɛ “nipa pa na ɔtene,” na ɔretwɛn “Onyankopɔn ahennie.” Ná “ɔyɛ Yesu suani nanso Yudafoɔ no ho suro nti ɔyɛɛ no kokoam” enti atɛn a Sanhedrin no bui no, ɔne wɔn anyɛ adwene. (Luka 23:50; Marko 15:43; Yohane 19:38) Bere a Yesu wuu wɔ dua no so no, Yosef nyaa akokoduru kɔɔ Pilato anim sɛ ɔmma wɔmfa Yesu amu mma no. Pilato bisaa ɔsraani panin no maa ɔsii no pi sɛ Yesu awu ampa. Afei ɔmaa Yosef kwan maa no kɔfaa Yesu amu no.
Yosef kɔtɔɔ nwera pa, na ɔkɔyii Yesu amu no fii dua no so, na ɔde nwera no kyekyeree amu no. Nikodemo a “berɛ a ɛdi kan no ɔbaa [Yesu] nkyɛn anadwo” no nso bɛboa maa wɔsiesiee Yesu amu no. (Yohane 19:39) Ɔde kurobo ne pɛprɛ a ne bo yɛ den bɛyɛ nkaribo ɔha na ɛba maa wɔde siesiee amu no. Ɛyɛ nnɛ a, anka ne dodow bɛboro kilogram 30. Wɔde saa nnuhwam no guguu ntoma mu de kyekyere Yesu sɛnea na Yudafo sie wɔn afunu no.
Ná Yosef wɔ ɛda bi a wɔatwa wɔ botan mu a wɔnsiee obiara wom da. Ɛhɔ na wɔde Yesu kɔtoe, na wɔde ɛboɔ kɛse bi tweree ano. Esiane sɛ na Homeda reyɛ adu nti, wɔyɛɛ no gya so gya so. Maria Magdalene ne Yakobo Kumaa maame Maria nyinaa, ɛbɛyɛ sɛ na wɔka ho na wɔsiesiee Yesu amu no. Wɔfirii hɔ no, wɔyɛɛ ntɛm kɔɔ fie “kɔsiesiee aduhwam ne ngo hwamhwam” a Homeda no twam a, wɔde bɛba abɛsiesie Yesu amu.​—Luka 23:56.
Ade kyee Homeda no, asɔfo mpanimfoɔ ne Farisifo no kɔɔ Pilato nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛakae sɛ nkontomponi no kaa berɛ a ɔte aseɛ no sɛ, ‘Nnansa akyi no mɛsɔre.’ Enti hyɛ ma wɔmmɔ ɛda no ho ban nkɔsi ne nnansa soɔ na n’asuafoɔ no ammɛwia no anka ankyerɛ nkurɔfoɔ sɛ, ‘Wanyane afiri awufoɔ mu!’ Anka yei akyi nkontomposɛm bɛsene kane deɛ no.” Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mowɔ awɛmfoɔ. Monkɔbɔ ho ban sɛdeɛ monim sɛ ɛsɛ.”​—Mateo 27:63-65.
Maria Magdalene, Yakobo maame Maria ne mmaa foforo duu hɔ Kwasida anɔpatutuutu. Wɔde nnuhwam kɔe sɛ wɔde rekɔkyekyere Yesu amu no. Wɔrekɔ no, wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Hwan na ɔbɛmuni boɔ no afiri ɛda no ano ama yɛn?” (Marko 16:3) Nanso ansa na wɔreba no, na asasewosow asi hɔ. Afei nso na Onyankopɔn bɔfo amuni boɔ no afiri hɔ, awɛmfo no kɔ, na biribiara nni ɛda no mu.
Adɛn nti na na wɔfrɛ Fida Ahoboaboa da? Adɛn nti na na saa Homeda no yɛ Homeda “kɛseɛ”?
Dɛn na Yosef ne Nikodemo yɛɛ Yesu amu no? Ayɔnkofa bɛn na na ɛda wɔne Yesu ntam?
Asɔfo no, dɛn na wɔkɔsrɛɛ sɛ Pilato nyɛ? Dɛn na ɛsii Kwasida anɔpatutuutu?